Juventus oo Barcelona kareebtay Champions League una soogudubtay Semi Final +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Juventus oo Barcelona kareebtay Champions League una soogudubtay Semi Final +Sawirro
Kooxda Juventus ayaa muujisay qaab difaaceed lala dhacay si ay isaga xaadiriso semi finalka horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League kadib markii ay waxba kama jiraan ka dhigeen weeraradii Barcelona gudaha geggida Nou Camp.
Xasuuqii 3-0 ka ahaa ee ay kaga soo badiyeen lugtii hore, Barca waxay xoogeeda isugu geysay sidii ay mar uun shabaqa kooxda Talyaaniga ah u taaban lahayd laakiin way ku guul-daraysteen inay ku celiyaan mucjisadii ay kaga soo gudbeen wareegii 16 dhamaadka, markaas oo ay
ka soo kabteen 4-0 is araggi hore lagaga soo badiyey, tartankana kaga reebeen Paris St-Germain.
Lionel Messi, oo uu isku daygiisii koobaadba ka diiday goolwade Gianluigi Buffon, ayaa birta korkeeda tooganayay markii dambe, halka Luis Suarez iyo Neymar labadubana ay fursadaha khasaarinayeen.
Juve oo difaac wanaagsa ay u dheerayd degenaanta, Ayaan dhinaca kalena ka madhnayn inay weerarto goolka, iyadoo uu Gonzalo Higuain uu toogtay goolwade Marc-Andre ter Stegen halka Juan Cuadrado uu fursad kale ka khasaariyey, ugu dambeyntiina kooxda Talyaaniga ah ayaa si weyn ugu damaashaaday guusha ay gaadhay.
Juventus waxay kula biirtay Real Madrid, Atletico Madrid iyo Monaco isku aadka la samaynayo Jimcaha ee afar dhamaadka.